CPL : जमैकाको नवौं खेल आज बार्बेडोस बिरुद्ध, यसकारण छ महत्वपूर्ण – WicketNepal
WicketNepal Staff, २०७७ भाद्र २०, शनिबार ०५:००
करेबियन प्रिमियर लिग टि-२० ( सिपिएल ) अन्तर्गत नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछाने सम्मिलित जमैका तलावाजले आफ्नो नवौं खेलमा शनिवार बार्बेडोस ट्राइडेन्ट्स बिरुद्ध खेल्दैछ। जमैका लिगको सेमीफाइनल प्रवेश गरिसकेको छ भने बार्बेडोस सेमीफाइनल दौडबाट बाहिरीसकेको छ। लिगको सेमीफाइनलमा ट्रिनबागो २ खेल खेल्न बाँकी रहँदै पहिलो स्थानमा रहँदै प्रवेश गरिसकेको छ। गायना, सेन्ट लुसिया र जमैका सेमीफाइनल पुगीसके पनि अंकतालिकामा दोश्रो, तेश्रो र चौथो स्थानमा कुन टिम हुने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ।
खेल : जमैका तलावाज VS बार्बेडोस ट्राइडेन्ट्स
मिति र समय : सेप्टेम्बर ५ , १२:०० बजे राति ( नेपाली समय )
अन्तिम ५ खेलको नतिजा : जमैका ३ – २ बार्बेडोस
लाइभ कहाँ हेर्ने : नेपालमा सिपिएल टि-२० को खेल टिभीमा स्टार स्पोर्ट्समा हेर्न सकिन्छ। यस्तै सीपीएल टि-२० को Faebook तथा Youtube मा पनि प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न सकिन्छ।
जमैकाको लागि यसकारण महत्वपूर्ण छ खेल
लिगको सेमीफाइनलमा अंकतालिकामा पहिलो र चौथो स्थानमा रहने टिम तथा दोश्रो र तेश्रो हुने टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यदी जमैका अंकतालिकामा चौथो रह्यो भने उसले सेमीफाइनलमा ट्रिनबागो नाइट राइडर्ससंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। लिगमा ८ वटै खेल जितेर अपराजित ट्रिनबागोसंग सेमीफाइनलमा भेट्न कुनै पनि टिम चाहनेछैन। जमैका तलावाज लिग चरणमा खेलेको दुवै खेलमा ट्रिनबागोसंग पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा ७ विकेटले तथा दोश्रो खेलमा १९ रनले पोलार्ड कप्तानीको ट्रिनबागोले जमैकालाई पराजित गरेको थियो।
जमैका अंकतालिकामा चौथो स्थानबाट तेश्रो स्थानमा उक्लने हो भने डेरेन सामी कप्तानीको सेन्ट लुसिया जुक्सले बाँकी दुवै खेलमा हार्नु पर्नेछ भने त्यसको साथै जमैकाले दुवै खेलमा जित्नु पर्नेछ। त्यसो भएको खण्डमा जमैकाको ११ अंक हुनेछ भने सेन्ट लुसियाको १० अंक हुनेछ। यस्तो भए सेमीफाइनलमा जमैकाले तुलनात्मक रुपमा ट्रिनबागो भन्दा कमजोर गायनासंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जमैकाले लिगमा गायनालाई १ खेलमा पराजित गरेको थियो भने १ खेलमा हार बेहोरेको थियो।
लिगमा जमैकाको हालसम्मको नतिजा ( ८ खेलमा ३ जित, ४ हार, १ नतिजाविहिन )
पाँचौ खेल Vs बार्बेडोस – ३६ रनले पराजित
छैठौं खेल Vs सेन्ट किट्स – ३७ रनले विजयी
सातौँ खेल Vsट्रिनबागो – १९ रनले पराजित
आठौँ खेल Vs सेन्ट किट्स – नतिजाविहिन
बार्बेडोस ट्राइडेन्ट्सको हालसम्मको नतिजा ( ९ खेलमा २ जित र ७ हार )
पाँचौ खेल Vs जमैका – ३६ रनले विजयी
छैठौं खेल Vs बार्बेडोस –२ विकेटले पराजित
सातौँ खेल Vs सेन्ट लुसिया – ३ रनले पराजित
आठौँ खेल Vs गायना – ८ विकेटले पराजित
नवौं खेल Vs गायना – ६ विकेटले पराजित
जमैकाको लयमा रहेका २ खेलाडी
१. ग्लेन फिलिप्स : प्रतियोगिताकै सर्वाधिक रनकर्ता फिलिप्सले ७ खेलमा ४१.३३ को स्ट्राइक रेटले २४८ रन बनाएका छन्। यस क्रममा २ अर्धशतक बनाएका न्युजिल्यान्डका दायाँ हाते विकेटकिपर ब्याट्सम्यानले सेन्ट किट्स बिरुद्ध अघिल्लो खेलमा अविजित ७९ रन बनाएका थिए। ओपनिंग ब्याटिंग गर्दै लामो समय क्रिजमा जम्न सक्ने फिलिप्सले सेन्ट लुसिया बिरुद्ध ४४, ट्रिनबागो बिरुद्ध पहिलो खेलमा ५८ तथा दोश्रो खेलमा ४१ रन बनाएका थिए।
ग्लेन फिलिप्स र सन्दिप लामिछाने
२. सन्दिप लामिछाने : लिगमा शानदार लयमा रहेका नेपाली गुग्ली ब्वाईले ७ खेलमा १० विकेट लिईसकेका छन्। लिगकै चौथो सर्वाधिक विकेटकर्ता सदिपले यस क्रममा ४.८५ प्रतिओभर रन खर्चेका छन्। लिगमा सन्दिप पाँचौ सबैभन्दा किफायती बलर हुन्। सन्दिपले लिगमा गायना, बार्बेडोस र सेन्ट किट्स बिरुद्ध खेलमा २/२ विकेट लिएका थिए। गायना बिरुद्ध खेलमा सन्दिपले मात्र ८ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए जुन जारि लिगकै तेश्रो किफायती स्पेल हो।
बार्बेडोसको लयमा रहेका २ खेलाडी
राशिद खान : लिगमा ९ खेलमा १० विकेट लिएका लेग स्पिनर सर्वाधिक विकेटकर्ताको सूचिमा पाँचौ स्थानमा सन्दिप लामिछाने, केसरिक विलियम्स र रायद इम्रिटसंगै रहेका छन्। यसक्रममा राशिदले लगातार किफायती बलिंग गरेका छन् र ६.७१ रन प्रतिओभर खर्चेका छन्। जमैका बिरुद्ध लिग चरणको खेलमा उनले ३३ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए।
जोन्सन चार्ल्स र राशिद खान
जोन्सन चार्ल्स : सर्वाधिक रनकर्ताको सूचीमा छैठौं स्थानमा रहेका विलियम्सले ९ खेलमा २३.७७ को औशतले २१४ रन बनाएका छन्। उनले सर्वाधिक ५२ रन ट्रिनबागो बिरुद्ध बनाएका थिए। ट्रिनबागो बिरुद्धनै दोश्रो खेलमा उनले ४७ रन बनाएका थिए। सेन्ट लुसिया बिरुद्ध उनले ३९ र ३५ रन बनाएका थिए। दायाँ हाते ओपनिंग ब्याट्सम्यानले जमैकासंग भने मात्र ३ रन बनाउन सकेका थिए।
लिगमा सन्दिप लामिछानेको हालसम्मको प्रदर्शन
लिगमा शानदार लय देखाइरहेका नेपाली लेग स्पिनरले ८ खेलमा ७ इनिंगमा बलिंग गर्दै १० विकेट लिईसकेका छन्। प्रतियोगिताकै सर्वाधिक विकेटकर्ताको सूचीमा सन्दिप पाँचौ स्थानमा राशिद खान, केसरिक विलियम्स र रायद इम्रिटसंगै रहेका छन्। यस क्रममा सन्दिपले मात्र ४.८५ प्रतिओभर रन खर्चेका छन् जुन लिगकै पाँचौ उत्कृस्ट हो। सन्दिपले गायना बिरुद्ध ४ ओभरमा ८ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए जुन लिगकै तेश्रो किफायती बलिंग स्पेल हो।
मध्यम ओभरहरुमा बलिंग गरिरहेका सन्दिपले पहिलो खेलमा सेन्ट लुसिया बिरुद्ध १ विकेट, दोश्रो खेलमा ट्रिनबागो बिरुद्ध १ विकेट, तेश्रो खेलमा गायना अमेजन वारियर्स बिरुद्ध २ विकेट, चौथो खेलमा गायना बिरुद्धनै १ विकेट, पाँचौ खेलमा बार्बेडोस बिरुद्ध २ विकेट तथा छैठौं खेलमा सेन्ट किट्स बिरुद्ध २ विकेट तथा सातौँ खेलमा ट्रिनबागो बिरुद्ध १ विकेट लिएका थिए। सेन्ट किट्स बिरुद्ध नतिजाविहिन रहेको खेलमा सन्दिपले बलिंग गर्नपाएनन्।
सन्दिपले लिगमा कुल १० विकेट लिएका छन्
पाँचौ खेल ( बार्बेडोस बिरुद्ध, ४-०-१६-२ ) पाँचौ खेलमा अझ राम्रो बलिंग गर्ने क्रममा सन्दिपले १६ रन खर्चेर २ विकेट लिए। यस क्रममा उनले राशिद खान र एसले नर्सको विकेट लिए। खेलमा सन्दिपले मात्र एउटा चौका दिए। स्पेलको चौथो ओभरमा मिचेल स्यान्टनरले हिर्काउनु अघि सन्दिपले ७४ बलमा चौका/छक्का नै दिएका थिएनन्। अघिल्लो २ खेलमा सन्दिपको स्पेल बाउन्ड्रीविहिन रहेको थियो। स्पेलको सुरुवात शानदार गरेका सन्दिपले पहिलो ओभरमा ३ रन, दोश्रो ओभरमा १ रन , तेश्रो ओभरमा ४ रन तथा चौथो ओभरमा ८ रन खर्चेका थिए।
छैठौं खेल ( सेन्ट किट्स बिरुद्ध, ४-०-२७-२ ) सेन्ट किट्स बिरुद्ध टिमले जित हात पार्दा सन्दिपले २ विकेट लिए। पछिल्लो खेलहरु भन्दा बढी रन खर्चेका सन्दिपले स्पेलको तेश्रो र चौथो ओभरमा इभिन लुइस र इश सोढ़ीको विकेट लिए। पहिलो ओभरमा ७ रन तथा दोश्रो ओभरमा १० रन खर्चिएका उनले तेश्रो ओभरमा २ रन खर्चेर १ विकेट तथा चौथो ओभरमा ८ रन खर्चेर १ विकेट लिए।
सातौँ खेल ( ट्रिनबागो बिरुद्ध, ४-०-२०-१ ) लगातार राम्रो बलिंग गर्ने क्रममा सन्दिपले १ विकेट लिन ४ ओभरमा २० रन खर्चिए। यस क्रममा उनले लेन्डल सिमोन्सको महत्वपूर्ण विकेट लिएका थिए। अन्य बलरहरु महँगो सावित हुँदा सन्दिपले सबैभन्दा किफायती बलिंग गरेका थिए।
आठौ खेल ( सेन्ट किट्स बिरुद्ध ) : बलिंग गरेनन्